မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: Gotta go to BKK Trip on coming Monday
လာလည်သွားတယ် Melody ..လေးမျက်နှာက ဘုရားမဟုတ်ဘူး .. ဘရမာဗုဒ္ဓ လို့ သူတို့ခေါ်တယ် .. နတ်ဘုရားပေါ့နော်ထိုင်းမှာ အဆောက်အဦးကြီးကြီးတိုင်းမှာ သူ့အတွက် သီးခြားနတ်စင်တွေ ထားပြီး ကိုးကွယ်ကြပါတယ်။ တတ်နိုင်ရင် တတ်နိုင်သလို ကြီးကြီးပေါ့၊ အိမ်တွေမှာလည်း နတ်စင်လေးတွေနဲ့ ကိုးကွယ်ကြပါတယ်။အလွန်တန်ခိုးကြီးသလို ဆုတောင်းလဲပြည့်ပါတယ်။ပျော်စရာခရီးဖြစ်ပါစေ
>>Harry, အိအိ အဲဂလိုလား four buddha images ဆိုပြီး လမ်းလယ်ကြီးမှာ ရှိတာလေ အဲဒါကို ညန်မာလိုပြန်တော့ လေးမျက်နှာဘုရားပဲပေါ့ ဟုတ်ဘူးလားဆို :)10Q Harry
ဓာတ်ပုံတွေကတော့ ရှုမဝပဲ။ နုပျိုနေဆဲပဲနော်။ ဘန်ကောက်ရောက်ရင် ကျွန်တော်မှာတာ မမေ့နဲ့နော်။
ဘန်ကောက်မှာ ငြိမ်းချမ်းသွားအောင် မယ်လိုဒီလေး ဖွင့်ပြလိုက်ပေါ့(အဲ) ပြန်လာရင် အလုပ်ရပြီလို့သာမှတ်လိုက် ...
i think you're sexy, want to see more.i still dont believe you're only52.
now i'm making your face with Angelina Jolie beach pic. I will let you know once I've uploaded on flickr. :)
Ok Steve, I loved to see your creation. I believe IT literate person can decide either original one or make-over one or new creation one. correct?
>> Melody .. နရွိုင်းဟိုတယ် ဘေးမှာ ရှိတာကို ပြောတာမဟုတ်လား။ Silom Road နဲ့ Rama IV Road လမ်းဆုံကလေ ...ဘုရားဟုတ်ဘူး မယ်လိုဒီရဲ့ .. Buddha ဆိုပေမယ့် သူက ဟိန္ဒူဘုရား၊ တနည်းအားဖြင့် ဗြဟ္မာလို့ဆိုရမှာပေါ့။ သူ့ကြင်ယာတော်က ကိုယ်ယောင်ဖျောက်တမ်းကစားလို့ သူက အရပ်လေးမျက်နှာကို ပြိုင်တူကြည့်ပြီး ရှာလို့ရအောင် မျက်နှာလေးခု ဖန်ဆင်းထားတယ်လို့ ကြားဖူးတာပဲ။အဲဒီ ဟိုတယ် အပြီးမသတ်နိုင်လို့ သူ့ဆီမှာဆုတောင်းတာ ပြည့်လို့ အဲလို သူ့နတ်ကွန်းအကြီးကြီးဆောက်ပေးထားတာ တဲ့ ... အဲဒါက Main ပဲ။ နန်းရင်း ခေါ်မှာပေါ့။ထိုင်းရုပ်ရှင်မင်းသမီးတယောက်လည်း အကယ်ဒမီ ဆိုလား ရဖို့ဆုတောင်းတယ်တဲ့၊ အဲဒါပြည့်ရင် ကိုယ်လုံးတီးအကနဲ့ လာပူဇော်ပါမယ်ဆိုပြီး အဓိဋ္ဌာန်တာ ပြည့်လို့ နတ်ကွန်းအပြည့် အပြင်လူ မမြင်အောင် ပိတ်ဖြူတွေကာပြီး လာပူဇော်တယ် ပြောတာပဲ။စင်ကာပူမှာလည်းအရင်ကတော့တွေ့ဖူးတယ်။ Aljunied MRT နားက လမ်းကြားလေးထဲက ထိုင်းဘုရားကျောင်း တခုထဲမှာရှိတယ်။ အခုတော့ ရှိသေးလား မပြောတတ်ဘူး။